အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးဖွငျ့ ချေါယူခဲ့သော ဆိုးရှာသညျ့ အပွောငျးအရှမြေ့ား။ – SoShwe
Home/Sport/အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးဖွငျ့ ချေါယူခဲ့သော ဆိုးရှာသညျ့ အပွောငျးအရှမြေ့ား။
Liverpool's new signing Joe Cole and manager Roy Hodgson (left) during the unveiling at Anfield, Liverpool.
အလှတျပွောငျးရှကွေ့ေးဖွငျ့ ချေါယူခဲ့သော ဆိုးရှာသညျ့ အပွောငျးအရှမြေ့ား။
admin December 20, 2021	Sport Leaveacomment
၁။ ဂြိုကိုးလျ (ခြဲလျဆီးမှလီဗာပူးသို့ ၊ ၂၀၁၀)
“မကျဆီက အံ့အားသငျ့စရာတှကေို စှမျးဆောငျပွနိုငျတယျဆိုရငျ ဂြိုကိုးလျကလညျး သူ့ထကျ ပိုကောငျးအောငျ မစှမျးဆောငျပွနိုငျရငျတောငျ မကျဆီလောကျတော့ ကောငျးအောငျ စှမျးဆောငျပွနိုငျပါတယျ . . .” လို့ လီဗာပူးအသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျး ဂြာရတျက ဂြိုကိုးလျနဲ့ ပတျသကျပွီး တဈခြိနျက ခြီုးကြူးပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။ ခြဲလျဆီးအသငျးရဲ့ ကစားသမားဟောငျးဖွဈတဲ့ ဂြိုကိုးလျဟာ (၂၀၁၀) ခုနှဈတှငျ လီဗာပူးအသငျးထံသို့ တဈပတျလုပျခ ပေါငျ (၉) သောငျးဖွငျ့ လေးနှဈစာခြုပျခြုပျဆိုကာ ရောကျရှိလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျကစားသမား ဂြိုကိုးလျဟာ လီဗာပူး ကစားသမားဘဝ ပထမဆုံး ဘောလုံးရာသီတှငျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ (၉) ပှဲသာ ပှဲထှကျကစားခှငျ့ရခဲ့ပွီး ဒဏျရာ ပွဿနာတှနေဲ့ ဆကျတိုကျရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာတော့ ဂြိုကိုးလျတဈယောကျ လီဗာပူးအသငျးကို ရောကျရှိပွီး (၁၃) လအကွာမှာပဲ ပွငျသဈလီဂူးကလပျ လိုငျလီအသငျးကို အငှားနဲ့ ပွောငျးရှရေ့ောကျရှိသှားခဲ့ပါတယျ။
၂။ မိုကျကယျအိုဝငျ (ယူနိုကျတကျမှစတုတျသို့ ၊ ၂၀၁၂)
ငှကျမွနျလေးလို့ ပရိသတျတှရေဲ့ တငျစားခွငျးကို ခံခဲ့ရတဲ့ မိုကျကယျအိုဝငျဟာ (၂၀၁၂) ခုနှဈမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးမှ စတုတျစီးတီးအသငျးထံ ပွောငျးရှကေ့စားခဲ့ပါတယျ။ စတုတျအသငျးကို ပွောငျးရှရေ့တဲ့ ရညျရှယျခကျြက ပှဲထှကျကစားသမား စာရငျးမှာ ပုံမှနျပါဝငျခှငျ့ ရရှိဖို့ ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ အိုဝငျတဈယောကျ တံကောကျကွောဒဏျရာကွောငျ့ အသငျးရဲ့ အဓိကတိုကျစဈမှူး ပီတာခရော့ချြရဲ့ နောကျအရံခုံမှာသာ ရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။
လီဗာပူးအသငျးရဲ့ ဂန်တဝငျတိုကျစဈမှူးဖွဈတဲ့ မိုကျကယျအိုဝငျဟာ စတုတျစီးတီးအသငျးအတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲထှကျ ကစားသမားစာရငျးမှာ တဈကွိမျမြှ ပါဝငျနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိဘဲ အသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ (၉) ပှဲသာ ကစားခှငျ့ရရှိခဲ့တဲ့ အခွအေနမှော (၈) ပှဲက လူစားဝငျ ကစားသမားအဖွဈသာ ပါဝငျကစားခှငျ့ရခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီကာလအတှငျးမှာလညျး အိုဝငျဟာ တဈဂိုးသာသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး (၂၀၁၃) ခုနှဈနှရောသီမှာတော့ ကစားသမား ဘဝကနေ အနားယူသှားခဲ့ပါတယျ။
၃။ ရောဘတျပီရကျဈ (ဗီလာရီးရဲယျမှအကျစတှနျဗီလာ ၊ ၂၀၁၀)
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ဂန်တဝငျကစားသမားဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ရောဘတျပီရကျဈဟာ အာဆငျနယျအသငျးကို စှနျ့ခှာပွီး လေးနှဈအကွာမှာ အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကထံ ပွနျလညျရောကျရှိလာခဲ့ပွီး အကျစတှနျဗီလာအသငျးနဲ့ (၂၀၁၀) ခုနှဈ နိုဝငျဘာမှာ (၆) လ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့ပါတယျ။
အသကျ (၃၇) နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ ရောဘတျပီရကျဈဟာ သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးအခြိနျတှကေို ကြျောလှနျခဲ့ပွီဖွဈပွီး ဂြာရတျဟူလီယာ ကိုငျတှယျနတေဲ့ ဗီလာအသငျးအတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျ (၉) ပှဲသာ ပါဝငျကစားခှငျ့ရရှိခဲ့ပွီး ပုံစံကောငျးတှေ ပွသနိုငျခဲ့ခွငျး မရှိတော့ပါဘူး။
၄။ အနယျလျကာ (ရှနျဟိုငျးရှနျဟှာ မှ ဝကျဈဘရှနျးသို့ ၊ ၂၀၁၃)
ပရီးမီးယားလိဂျ ကလပျအသငျးမြားဖွဈတဲ့ အာဆငျနယျ၊ လီဗာပူး၊ မနျစီးတီး၊ ဘျောလျတနျနဲ့ ခြဲလျဆီး အသငျးမြားမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ အနယျလျကာဟာ သူ့ရဲ့ ခွောကျသငျးမွောကျ ပရီးမီးယားလိဂျ ကလပျအသငျးဖွဈတဲ့ ဝကျဈဘရှနျးအသငျး၌ ကစားရနျအတှကျ (၂၀၁၃) ခုနှဈတှငျ တရုတျစူပါလိဂျကလပျ ရှနျဟိုငျးရှနျဟှာအသငျးကို စှနျ့ခှာခဲ့ပါတယျ။
အသကျ (၃၄) နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ အနယျလျကာဟာ ဝကျဈဟမျးအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲစဉျတဈခုတှငျ ဂိုးသှငျးအပွီး ပွငျသဈနိုငျငံရေးနဲ့ ပတျသကျဆကျစပျနသေညျ့ အောငျပှဲခံဟနျတဈမြိုးဖွငျ့ အောငျပှဲခံခဲ့တာကွောငျ့ အင်ျဂလနျဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ (FA) ရဲ့ ပှဲပယျပွဈဒဏျနဲ့ ဒဏျငှခေမြှတျခွငျးမြားကို ခံခဲ့ရပွီးနောကျ ဝကျဈဘရှနျးအသငျးအတှကျ လုံးဝ ပွနျမကစားပေးဖွဈတော့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။
၅။ ဟားဂရဗျေ့ဈ (ယူနိုကျတကျ မှ မနျစီးတီးသို့ ၊ ၂၀၁၁)
ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးနဲ့အတူ ဘှနျဒကျဈလီဂါ ခနျြပီယံဆု လေးကွိမျ၊ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျဖလား၊ ခနျြပီယံလိဂျဖလားမြားကို ဆှတျခူးရရှိခဲ့တဲ့ အိုဝငျဟားဂရဗျေ့ဈရဲ့ ကွံ့ခိုငျမှု အခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီး မေးခှနျးထုတျစရာမြားရှိခဲ့ပါတယျ။
(၂၀၁၁) ခုနှဈ နှရောသီမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးကုနျဆုံးကာ အသငျးနဲ့လမျးခှဲပွီးနောကျ သူ့ရဲ့ You Tube ဗီဒီယိုမြားမှတဈဆငျ့ ဟားဂရဗျေ့ဈအနနေဲ့ ကွံ့ခိုငျမှု အပွညျ့အဝရှိသေးကွောငျး ပွသခဲ့တာကွောငျ့ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ မွို့ခံပွိုငျဘကျ မနျစီးတီးအသငျးက ဟားဂရဗျေ့ဈျကို ချေါယူခဲ့ပါတယျ။ နှဈပေါငျး (၄၄) နှဈကွာ အမှတျပေးခနျြပီယံဆုနဲ့ ဝေးကှာနခေဲ့ရတဲ့ မနျစီးတီးအသငျးအတှကျ ဒီချေါယူမှုဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ ချေါယူမှု တဈခုအဖွဈယူဆခဲ့ကွပမေယျ့ ဟားဂရဗျေ့ဈတဈယောကျ ဒဏျရာပွဿနာတှကွေောငျ့ မနျစီးတီးအသငျးအတှကျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ တဈပှဲသာ ပါဝငျကစားခဲ့ရပွီး မနျစီးတီးအသငျးက အမှတျပေးခနျြပီယံဆုဆှတျခူးနိုငျခဲ့သညျ့တိုငျအောငျ သတျမှတျထားတဲ့ပှဲအရအေတှကျ ပွညျ့အောငျ မကစားနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ခနျြပီယံဆုတံဆိပျကိုလညျး ရရှိခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့သော ဆိုးရွာသည့် အပြောင်းအရွှေ့များ။
၁။ ဂျိုကိုးလ် (ချဲလ်ဆီးမှလီဗာပူးသို့ ၊ ၂၀၁၀)
“မက်ဆီက အံ့အားသင့်စရာတွေကို စွမ်းဆောင်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင် ဂျိုကိုးလ်ကလည်း သူ့ထက် ပိုကောင်းအောင် မစွမ်းဆောင်ပြနိုင်ရင်တောင် မက်ဆီလောက်တော့ ကောင်းအောင် စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ပါတယ် . . .” လို့ လီဗာပူးအသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဂျာရတ်က ဂျိုကိုးလ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ချိန်က ချီုးကျူးပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကစားသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဂျိုကိုးလ်ဟာ (၂၀၁၀) ခုနှစ်တွင် လီဗာပူးအသင်းထံသို့ တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင် (၉) သောင်းဖြင့် လေးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ကစားသမား ဂျိုကိုးလ်ဟာ လီဗာပူး ကစားသမားဘဝ ပထမဆုံး ဘောလုံးရာသီတွင် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၉) ပွဲသာ ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာ ပြဿနာတွေနဲ့ ဆက်တိုက်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဂျိုကိုးလ်တစ်ယောက် လီဗာပူးအသင်းကို ရောက်ရှိပြီး (၁၃) လအကြာမှာပဲ ပြင်သစ်လီဂူးကလပ် လိုင်လီအသင်းကို အငှားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
၂။ မိုက်ကယ်အိုဝင် (ယူနိုက်တက်မှစတုတ်သို့ ၊ ၂၀၁၂)
ငှက်မြန်လေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ တင်စားခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်ဟာ (၂၀၁၂) ခုနှစ်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းမှ စတုတ်စီးတီးအသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပါတယ်။ စတုတ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပွဲထွက်ကစားသမား စာရင်းမှာ ပုံမှန်ပါဝင်ခွင့် ရရှိဖို့ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အိုဝင်တစ်ယောက် တံကောက်ကြောဒဏ်ရာကြောင့် အသင်းရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး ပီတာခရော့ခ်ျရဲ့ နောက်အရံခုံမှာသာ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။
လီဗာပူးအသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်တိုက်စစ်မှူးဖြစ်တဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်ဟာ စတုတ်စီးတီးအသင်းအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲထွက် ကစားသမားစာရင်းမှာ တစ်ကြိမ်မျှ ပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ (၉) ပွဲသာ ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ အခြေအနေမှာ (၈) ပွဲက လူစားဝင် ကစားသမားအဖြစ်သာ ပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်းမှာလည်း အိုဝင်ဟာ တစ်ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး (၂၀၁၃) ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ ကစားသမား ဘဝကနေ အနားယူသွားခဲ့ပါတယ်။
၃။ ရောဘတ်ပီရက်စ် (ဗီလာရီးရဲယ်မှအက်စတွန်ဗီလာ ၊ ၂၀၁၀)
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရောဘတ်ပီရက်စ်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းကို စွန့်ခွာပြီး လေးနှစ်အကြာမှာ အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အက်စတွန်ဗီလာအသင်းနဲ့ (၂၀၁၀) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှာ (၆) လ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အသက် (၃၇) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ ရောဘတ်ပီရက်စ်ဟာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဂျာရတ်ဟူလီယာ ကိုင်တွယ်နေတဲ့ ဗီလာအသင်းအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် (၉) ပွဲသာ ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။
၄။ အနယ်လ်ကာ (ရှန်ဟိုင်းရှန်ဟွာ မှ ဝက်စ်ဘရွန်းသို့ ၊ ၂၀၁၃)
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်အသင်းများဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်၊ လီဗာပူး၊ မန်စီးတီး၊ ဘော်လ်တန်နဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းများမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ အနယ်လ်ကာဟာ သူ့ရဲ့ ခြောက်သင်းမြောက် ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ ဝက်စ်ဘရွန်းအသင်း၌ ကစားရန်အတွက် (၂၀၁၃) ခုနှစ်တွင် တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ် ရှန်ဟိုင်းရှန်ဟွာအသင်းကို စွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်။
အသက် (၃၄) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အနယ်လ်ကာဟာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုတွင် ဂိုးသွင်းအပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ဆက်စပ်နေသည့် အောင်ပွဲခံဟန်တစ်မျိုးဖြင့် အောင်ပွဲခံခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FA) ရဲ့ ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်နဲ့ ဒဏ်ငွေချမှတ်ခြင်းများကို ခံခဲ့ရပြီးနောက် ဝက်စ်ဘရွန်းအသင်းအတွက် လုံးဝ ပြန်မကစားပေးဖြစ်တော့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဟားဂရေ့ဗ်စ် (ယူနိုက်တက် မှ မန်စီးတီးသို့ ၊ ၂၀၁၁)
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့အတူ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ချန်ပီယံဆု လေးကြိမ်၊ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားများကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့ အိုဝင်ဟားဂရေ့ဗ်စ်ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာများရှိခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၁၁) ခုနှစ် နွေရာသီမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကာ အသင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက် သူ့ရဲ့ You Tube ဗီဒီယိုများမှတစ်ဆင့် ဟားဂရေ့ဗ်စ်အနေနဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု အပြည့်အဝရှိသေးကြောင်း ပြသခဲ့တာကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် မန်စီးတီးအသင်းက ဟားဂရေ့ဗ်စ်ကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း (၄၄) နှစ်ကြာ အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့ရတဲ့ မန်စီးတီးအသင်းအတွက် ဒီခေါ်ယူမှုဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ခေါ်ယူမှု တစ်ခုအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပေမယ့် ဟားဂရေ့ဗ်စ်တစ်ယောက် ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့် မန်စီးတီးအသင်းအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် တစ်ပွဲသာ ပါဝင်ကစားခဲ့ရပြီး မန်စီးတီးအသင်းက အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ပွဲအရေအတွက် ပြည့်အောင် မကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ချန်ပီယံဆုတံဆိပ်ကိုလည်း ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။
Previous ဂပြနျက ရထားဘူတာတှမှော ဘာလို့မီးအပွာရောငျတှေ အမြားဆုံးသုံးထားရတာလဲ ? ? ?
Next ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကရြှုံးခဲ့တဲ့ နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူးမြား။
ခယျြလျဆီးအသငျးပိုငျရှငျအသဈ တော့ဒျဘိုလဟော ရျောနယျဒိုရဲ့အေးဂငျြ့ဖွဈသူ ဂြော့မနျဒကျဈနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး ရျောနယျဒိုကို ချေါယူနိုငျခွငျးရှိ၊ မရှိဆိုတာကို ဆှေးနှေးခဲ့တယျလို့ အင်ျဂလနျမီဒီယာအမြားအပွားက ဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။ The Athletic ရဲ့ ဖျောပွခကျြအရ …